प्रचण्डबाट टाढिँदै बादल : मन्त्री हुनुको बाध्यता कि राजनीतिक स्वार्थको चाल ?::Point Nepal
प्रचण्डबाट टाढिँदै बादल : मन्त्री हुनुको बाध्यता कि राजनीतिक स्वार्थको चाल ?
काठमाण्डौँ । नेपाल कम्यु´निस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सहयोद्धा रामबहादुर थापा ‘बादल’ अ´त्यन्तै नि´कट पात्रका रूपमा हेरिन्थे । जन यु द्धकालकै बेला बादलको हाउभाउ, शारीरिक चालढाल र भाषणकला प्रचण्डसँग उस्ताउस्तै मिल्ने च´र्चा हुन्थ्यो ।
जन यु द्धकालमा मात्रै होइन, त´त्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त´त्कालीन रक्षामन्त्री बादलसँग जोडिएर आयो – सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रक रण । रक्षामन्त्री बादल र सेनापति कटवालको विवाद चर्किंदै गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नै दिनुप¥यो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनेसम्मका विश्वासपात्र थिए बादल । त´त्कालिन सेनापति कटुवालसंग प्रचण्डको सां´ठगांठ निकै बलियो भएपनि बादल र तत्का´लिन अर्थमन्त्री बावुराम भट्टराईको निकटता बढ्न लागेको सं´केत पाएसंगै उनी बादलको कदमलाई समर्थन गर्न बाध्य भएका थिए ।
संसदीय राजनीतिका क्रममा प्रचण्डको बाटो मन नपाएर बादल केही समय मोहन वै´द्य ने´तृत्वको छुट्टै पार्टीमा लागे तर फर्किए । पार्टी फुटाएर गएको विगतलाई पनि बिर्सिंदै प्रचण्डले वर्तमान सरकारमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गराउँदै आकर्षक गृह मन्त्रालयको मन्त्री बनाए । प्रचण्डले बादललाई साह्रै विश्वास गर्दै आएका थिए । अहिले त´त्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेकपा बनेको भएपनि त्यतिबेला माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको नेतृत्व बादलकै हातमा थियो ।
सरकारमा पुगेपछि बादल फेरिँदै गए । सरकारले गर्ने निर्णयमा बादलले पूर्व माओवादी पक्ष लिन सकेनन्, बरु प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षको रूपमा भूमिका नि´र्वाह गर्न थाले । कतिपयले यसलाई सरकारमा हुनुको बाध्यताका रूपमा बुझे । अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यस्तै बुझाइमा थिए । तर समयक्रमसँगै प्रचण्डको बुझाइ र बादलको अवस्था फेरिँदै गएको छ ।